Soomaaliya, 06 September 2019
Soomaaliya oo rasmi ugu jawaabtay Kenya
Markii ugu horraysay ayaa Soomaaliya ay si rasmi ah uga hadashay aragtida ay ka qabto codsiga ka yimid Kenya ee ah in Maxkamadda Caalamiga ah ee Garsoorka dunida ee magaalada Hague ay dib u dhigto dhagaysiga dacwadda.
Barakacayaal cusub oo soo gaaray duleedka Muqdisho
Xilli ay Qaramada Midoobay iyo hay’adaha gargaarku sheegeen inuu hoos u dhacay wax soo saarkii beeraha ilaa 70%, ayaa waxaa dhinaca kalena duleedka magaalada Muqdisho soo buux dhaafiyey qoysas cusub oo barakacayaal ah.
Maxay ka dhigan tahay tallaabada Kenya ee kiiska badda?
Warbaahinta dalka Kenya ayaa qoray in dawladda dalkaasi ay ka codsatay maxkamadda caalimiga ah ee cadaaladda in ay dib u dhigto dhageysiga dacwadda badda ee ay Soomaaliya ay xareysay.
Shirkii dib u heshiisiinta Galmudug ee lagu waday inuu maanta ka furmo magaalada Dhuusamareeb ayaa mar kale uu dib u dhac ku yimid.
Dhaqtar Soomaali ah oo ka howlgala Turkiga
Dr. Maxamed Axmed Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada fara-kutiriska ah ee culuumta caafimaadka ku bartay Turkiga, ee hadana shaqooyinka ka helay isbitaallada Turkiga.